India(India) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
दिल्लीका सबै निजी कार्यालय बन्द गर्न आदेश, वर्क फ्रम होम लागू
काठमाण्डौ । कोभिडको बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै भारतको दिल्लीमा सबै निजी कार्यालय बन्द गर्न आदेश दिइएको छ। आपत प्रबन्धन अथोरिटी (डीडीएमए) ले दिल्लीका सबै निजी कारण बन्द गर्न आवेदन दिएको हो। निर्देशनबमोजिम अब दिल्लीमा आकस्मिक सेवाका निजी कार्यालयहरुमात्रै खुला हुनेछन्। त्यस्तै छुट श्रेणीमा रहेका निजी कार्यालयहरुमा खोल्न...
भारतमा कोरोना तीव्रगतिमा फैलिँदै, एकैदिन ९० हजार बढीमा पुष्टि
काठमाण्डौ । भारतमा एकैदिनमै कोरोना संक्रमणको मामिला ५६ प्रतिशतले बढेको छ। पछिल्लो २४ घन्टामा भारतमा ९० हजार ९२८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जब कि अघिल्लो भारतमा ५८ हजार ९७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो हिसाबले एकैदिन भारतमा कोरोना संक्रमणको मामिला ५६.५१ प्रतिशतले उकालो लागेको हो। पछिल्लो २४ घन्टामा भारतमा...
कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि दिल्लीमा ‘विकेन्ड कर्फ्यु’, ५०% कर्मचारीले घरबाटै काम गर्नुपर्ने
काठमाण्डौ । कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि छिमेकी मुलुक भारतको दिल्लीमा ‘विकेन्ड कर्फ्यु’ जारी गरिएको छ। दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियाले दिल्लीमा ‘विकेन्ड कर्फ्यु’को घोषणा गरेका हुन्। अब साताको शनिबार र आइतबार दिल्लीमा कर्फ्यु लगाइनेछ। यसअघि कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि दिल्लीमा रात्रिकालीन...
मतदातालाई भाजपाको अफर : १ करोड भोट पाए रु. ७० मै रक्सी उपलब्ध गराउने
काठमाण्डौ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आन्ध्र प्रदेश अध्यक्ष सोमु वीरराजुले सन् २०२४ को विधानसभा चुनावमा पार्टीले १ करोड भोट पाए रक्सीको मूल्य ७० भारतीय रुपैयाँ कायम गर्ने वचन दिएका छन्। विजयवडामा मंगलबार आयोजित एक सभामा अध्यक्ष वीरराजुले राज्यमा उच्च मूल्यमा खराब रक्सी बेचिरहेको र चर्चित ब्रान्ड नरहेको पनि बताए। समाचार...
भारतमा ओमिक्रोनबाट संक्रमित हुने संख्या ह्वात्तै बढ्यो, एकैदिन १७ जनामा पुष्टि
काठमाण्डौ । कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट संक्रमित हुनेको संख्या भारतमा ह्वात्तै बढेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा आइतबार एकैदिन १७ जना ओमिक्रोनबाट संक्रमित भएका छन्। जब कि शनिबारसम्म ओमिक्रोनबाट संक्रमित हुनेको संख्या ४ मात्र रहेको थियो। समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार आइतबार भारतको महाराष्ट्रमा ७, राजस्थानमा ९ र दिल्लीमा...
भारतमा पनि देखियो ओमिक्रोन, दक्षिण अफ्रिकाबाट फर्केका २ जनामा पुष्टि
काठमाण्डौ । भारतमा पनि कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ जनामा ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएको पुष्टि गरेको छ। भारतको कर्नाटकमा २ जना नयाँ भेरिएन्टबाट संक्रमित भएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमा ६६ वर्ष र ४६ वर्षका व्यक्ति छन्। यी दुवैजनाको सम्पर्कमा आएकाहरुको पहिचान गरी कोभिड परीक्षण...
काठमाण्डौ । भारत सरकारले बैंकिङ क्षेत्रको नन पर्फमिङ एसेस्ट (एनपीए) को समस्याबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि ‘ब्याड बैंक’को अवधारणालाई अनुमोदन गरेको छ। भारत सरकारले नेसनल एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) मा ३०.६ बिलियन भारतीय रुपैयाँ (४.१ बिलियन डलर) बराबरको ग्यारेन्टी विस्तारलाई अनुमोदन गरेको हो। भारतीय बैंकिङ...
भारतमा विद्युत संकट बढ्ने सम्भावना, अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ?
काठमाण्डौ । भारतमा विद्युतको चरम संकट हुने सम्भावना देखिएको छ। कोइलामा आधारित भारतका १३५ विद्युत् गृहमा कोइला निकै कम भएपछि विद्युतको चरम संकट हुने देखिएको हो। कुल विद्युत् उत्पादनको ७० प्रतिशत कोइलाबाट उत्पादन हुने भारतको महामारीपछिको आर्थिक उत्थानमा यसले गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। यो संकट महिनौँदेखि...
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीले सम्पूर्ण विश्व आक्रान्त बनेका बेला भारतमा अर्को एउटा भाइरस फैलिने जोखिम देखिएको छ। भारतमा कोरोनाभाइरसभन्दा पनि खतरनाक निपा भाइरसबाट एक बालकको मृत्यु भएको खबर बाहिरिएको छ। परिचय नखुलेका बालकको गत आइतबार केरेला अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको एनडीटीभीले जनाएको छ। भारतको दक्षिणी राज्य केरेला कोरोना...
पहिलो डिजिटल करेन्सी ल्याउँदै भारत, विभिन्न पक्षको अध्ययन सुरु
काठमाण्डौ । भारतले आफ्नो पहिलो डिजिटल करेन्सी (मुद्रा) ल्याउने भएको छ। भारतको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर शक्तिकान्त दासले रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले आगामी डिसेम्बर महिनासम्ममा परीक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो डिजिटल करेन्सी लन्च गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन्। चीन, युरोप र अमेरिकाका केन्द्रीय बैंकहरु पनि आफूद्वारा जारी डिजिटल...
कोरोना संक्रमण घट्न थालेपछि यूपी बिहारमा रेल सेवा सुरु गर्ने निर्णय
काठमाण्डौ । भारतमा कोरोना संक्रमणका मामिलामा गिरावट आउन थालेसँगै त्यहाँको रेल विभागले यूपी बिहारका कयौँ ठाउँहरुमा रेल सेवा सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। रेल विभागले कोरोनाका कारण बन्द अवस्थामा रहेका रेल सेवाहरु पुनः सुचारु गर्ने तयारी गरेको हो। भारतीय रेलवेले पूर्वमध्य रेलअन्तर्गत चल्ने करिब दुुई दर्जन यात्रुवाहक रेलहरु परिचालन...
कोभिडको दोस्रो लहरले भारतीय अर्थव्यवस्थामा झट्का, अनुमानित विकास दर घट्ने प्रक्षेपण
काठमाण्डौ । बेलायतको ब्रोकरेज फर्म बार्कलेजले वित्त वर्ष २०२२ मा भारतको विकास दरको अनुमान घटाएको छ। बार्कलेजले यसअघि गरिएको भारतको विकास दर ०.८२ प्रतिशत घटाउँदै ९.२ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको हो। कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण परेको आर्थिक प्रभावका कारण भारतको विकास दर घट्ने बार्कलेजले प्रक्षेपण गरेको छ। बार्कलेजका चिफ इन्जिया...
सेप्टेम्बर २१ बाट भारतमा स्कुल खुल्ने, नेपालमा कहिले ?
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीका कारण विगत ६ महिनादेखि बन्द रहेका भारतका स्कुलहरु आंशिक रुपमा खुल्ने भएका छन्। भारत सरकारले यही सेप्टेम्बर २१ तारिखदेखि कक्षा ९ देखि १२ सम्म खोल्ने अनुमति दिएको हो। तर विद्यार्थीहरुका लागि स्कुल जान भने बाध्यकारी नहुने भनिएको छ। सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार यदि विद्यार्थीहरु स्कुल जान चाहँदैनन् भने...
भारतमा एकैदिन अहिलेसम्मकै उच्च ८४ हजारमा कोरोना संक्रमण
काठमाण्डौ। भारतमा कोरोनाभाइरसबाट दैनिक सङ्क्रमितहरुको संख्या अत्यधिक बृद्धि भएको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार एकैदिनमा झण्डै ८४ हजार जना कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भेटिएका छन्। सरकारी अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ८३ हजार ८८३ जना सङ्क्रमित भेटिएका छन्। यो संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै भएको पनि अधिकारीहरुको...
कोरोना संक्रमणबाट उत्तर प्रदेशकी शिक्षामन्त्रीको मृत्यु
काठमाण्डौ । भारतको उत्तर प्रदेश सरकारकी प्राविधिक शिक्षामन्त्री कमला रानी वरुणको कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट आइतबार बिहान मृत्यु भएको छ। मन्त्री वरुणमा गत जुलाई १८ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि उनलाई उपचारार्थ लखनउस्थित सञ्जय गान्धी पीजीआई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। करिब दुई साता लामो उपचारका क्रममा पनि उनको...
सरकारको आम्दानी र खर्चः ४५.९१% राजश्व संकलन, पुँजीगत खर्च १३.४४% मात्र
इन्ट्राडे करेक्सनमै सम्हालियो सेयर बजार, नेप्सेमा दोहोरो अंकको बढोत्तरी